Pero: Ny fankalazana ny faha 20 taonan’ny ‘Nubeluz’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2010 14:18 GMT
Ireo Peroviana izay mbola ankizy madinika tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 no mety hahatadidy ny fandaharana tena nalaza tao amin'ny fahitalavitra Nubeluz. Tamin'izany taona izany, nandalo fotoan-tsarotra mafy i Pero; fanafihan'ireo mpampihorohoro no hita matetika amin'ny vaovao , zatra niaina tao anatin'ny tsy fisian'ny herinaratra ny olona, ary ny tena misongadina mihoatra ireo, Manasarotra ny fiainana ny halafosan'ny vidim-piainana be loatra .
Nandritra izany vanim-potoana izany, ny marainan'ny Sabotsy sy ny Alahady no mba mihiratra kely noho ny fandaharan'ny fahitalavitra Peroviana iray tsy mbola nisy nanao mihitsy. Zavatra telo no tena asongadin'ny Nubeluz : 1) tsy noheverina ho fampisehoana amin'ny fahitalavitra izy fa ho fetin'ny ankizy madinika (voarara ny teny hoe “fandaharana”); 2) notontosaina tao amin'ny rahona mahagaga ny fety izay mitety toerana araka ny baikon'i Glufo, izay manana namana vehivavy roa antsoina hoe “dalinas” (teny glofika ) ary ; 3) tsy maintsy misy rahona avokoa ny kilalao rehetra atao..
Amin'ny teny Española, midika hoe rahona ny hoe “nube” . Noho izany, raha ara-bakiteny, azo adika hoe ‘raho-mazava’ ny anaran'ny fandaharana .
Amin'ity herinandro, mankalaza ny tsingerintaonany faha 20 i Nubeluz, ary nanao hetsika mikasika ity fotoan-dehibe ity ireo mpitoraka bilaogy sasany ; Mankalaza ny tsingerintaona ny pejy iray ao amin'ny Facebook [es] natokana ho an'ny fandaharana.
Ao amin'ny Todo pasado (no) fue mejor [es],ny mpitoraka bilaogy Sandro Escandón no mamehy [es] ny tontolo manodidina ny fahitan'ireo ankizy ny fandaharana tany Pero:
[…] Raha toa mbola miady amin'ny halafon'ny vidim-piainana sy ny filaharana ary ny fampihorohoroana ireo ray aman-dreninay ( izaho sy ireo ankizy niara-lehibe tamiko), dia tafiditra tao anatin'ity rahona ity toy ny tao anaty baloma krisitaly tsy mahalala ny zavamisy mankaloiloy teo amin'ny firenena kosa ny ankamaroanay, ireo ankizilahy sy ankizivavy niara-lehibe tamiko, izay tsy fantatra mihitsy hatramin'izao ny fiantraikany ho anay, adin'ny 5-manomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 1 ora atoandro- ao anatin'ity tontolo mahagaga antsoina hoe “ny tontolo glofika” na “Nubeluz”, izay ahitana ny Kapiteny Glufo izay mitondra ho anay ireo dalina, ireo cindela ary ireo golmodi tamin'ny 9 Septambra 1990.
Mizara ny zavatra niainany ny mpitoraka bilaogy i Jhon Núñez Sandman, ao amin'ny bilaogy Diario de un soltero [es] ao amin'ny lahatsorany “Yo fui nubecino” (efa nubecino aho) raha niteny azy ny dadany fa nanana tapakila hijerena mivantana ny Nubeluz :
Taona 1993, ilay fahazazana tena nahagaga izay tsy hiverina intsony , izay naka ny tsara indrindra tamin'ny niandohan'ny fahazazako ary namela fahatsiarovana tena tsara indrindra ho ahy tamin'izany .[…]
Indray maraina, tonga ny dadako ary niteny tamiko fa nanana tapakila izy ho any amin'ny ‘Nubeluz’, Niatsambotsambotra ery aho, tsy nino izany, nambenako fatratra toy ny volamena ireo tapakila ireo, nataoko tany ambany kidoro, amin'izay tsy hanakorontana ny manodidina azy , ireo rahalahiko ratsy toetra .
Nanana ny vondrona toambolana vaovao [es] iray manontolo i Nubeluz . Araka ity voambolana “glofika” ity , iray amin'ireo ankizy tao amin'ny fandraisam-peon'ny fahitalavitra i “nubecino” ary iray amin'ireo izay nahita ny fandaharana tany an-tranony i “nubetor”
Ireo ankizy tao amin'ny fandaharana Nubeluz tamin'ny taona 1990. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr medea_material nampiasana avy amin'ny fahazoan-dalana Attribution 2.0 Generic Creative Commons license
Nisy ireo hira maro narahin-kafatra ho an'ny ireo ankizy sy ireo ray aman-dreniny tao. Mety ny tena tsaroana indrindra angamba dia ny ‘Papi, deja de fumar’ (Dada, ajanony ny fifohana), izay nangataka toy izao[es]:
Dada , dada , dada , ajanony ny fifohana
Tsy afa-miaina akory aho rehefa manoroka ahy ianao
Avelao io sigara io raha tena tia ahy ianao
Tsy hitanao ve fa ratsy koa io ho ahy. Ajanony io !
Mampiseho sary ahitana ireo fihaonan'ny mpilalao sy ireo ekipa mpanatontosa, ny bilaogy Ser peruano [es] ary mizara ireo fihetseham-po avy amin'ny filalaovana :
Tsaroan'izy ireo ny tahotra izay natrehany isaky ny fiodinana any ivelan'ny firenena? ” Ao amin'ny trano fandraisam-peo, fakantsary iray ihany no jerena, fa rehefa mivoaka any ivelany izahay, amin'ireo fampisehoana goavana, izay ahitana olona anarivony maro miandry anay, somary matahotra kely ihany izahay, ny tena marina, zatra nandeha tanatin'ny tahotra izahay. Ary tena hitanay ny fahombiazan'ny fandaharana sy ireo mpanaraka izany anarivony .”
Fa nifarana ny zavatra nahafinaritra rehetra raha niditra tao amin'ny tontolo mahagaga ireo raho-mainty.Namono tena I Mónica Santa María, fantatra amin'ny anarana hoe ‘dalina chiquita’ (i dalina kely ) tamin'ny volana Marsa 1994. Nosoloin'ireo ankizivavy hafa ny toerany izay, miaraka amin'i Almendra Gomelsky, ilay dalina hafa, ary nanao izay tsara indrindra vitany izy ireo nanohy ny zavatra nahafinaritra rehetra tao .
Nifarana tamin'ny taona 1996 ny tontolo mahagaga an'i Nubeluz, fa mbola mety nahare ny teny hoe “grántico, palmani, zum”, (mitovy amin'ny hoe “vonona, miomana, lasa !” amin'ny teny glofika ) ireo ankizy tany aorian'ny taona 1990 rehefa hanomboka ny tantara mahafinaritra .